The Package ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
The Package ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ 2017 ခုနှစ်မှာ JTBC ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Drama လေး တစ်ခုပါ …
ယွန်းဆိုဆို ( Lee Yeon Hee) က ပြင်သစ်ခရီးသွားလမ်းညွှန်တစ်ယောက်ပါ … တစ်နေ့ သူမဟာ ခရီးစဉ်တစ်ခုရဲ့ ခရီးသွားလမ်းညွှန်အဖြစ် လိုက်ပါခဲ့ရပါတယ် … သူ့ခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါလာတဲ့ ခရီးသွားတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုစီ ရှိနေကြတဲ့အခါ ….
ရှေးလူကြီးတွေ ပြောကြတယ် တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် သိချင်တဲ့အခါ ခရီးသွားကြည့်ပါတဲ့ … ခရီးတစ်ခုကို တူတူသွားကြတဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သံယောဇဉ်တွေ , မေတ္တာတွေနဲ့ အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီဖြစ်ကြပါတယ် …
ဒီကားလေးမှာရော မေတ္တာအပြည့်နဲ့ ပျော်ရွင်တဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခု ဖြစ်လာမလား …? သတ်ပွဲတွေ နဲ့ ခရီးစဉ် ဖြစ်လာမလားဆိုတာကို ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ရမယ့် Family Drama series တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ် …
ပြင်သစ်နိုင်ငံကို နောက်ခံထားပြီး ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ ခရီးစရိတ်မလိုပဲ ပြင်သစ်ရောက်သလို ဖြစ်နေမှာနော် …
Main Cast တွေကတော့ –
ပြင်သစ်ခရီးသွားလမ်းညွှန်မလေး … ယွန်းဆိုဆို အဖြစ် Lee Yeon Hee
ခရီးသွား … ဆန်းမာရူ အဖြစ် Jung Yong Hwa (CNBlue)
တို့နဲ့တူတူ … သရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်ရိုက်ကူးထားပါတယ် …
စုစုပေါင်း အပိုင်းရေ ၁၂ ပိုင်း ပါဝင်ပြီး Rating အရ IMDb မှာ 7.3/10 နှင့် MyDramaList မှာ 8.3/10 အသီးသီး ရရှိထားခဲ့ပါတယ် …
Translators : Elvis & Ziven
Episode 01 ( 490 MB )
Openload SolidDrive Mega
Episode 02 ( 493 MB )
Episode 03 ( 491 MB )
Episode 04 ( 490 MB )
Episode 05 ( 517 MB )
Episode 06 ( 493 MB )
Episode 07 ( 520 MB )
Episode 08 ( 512 MB )
Episode 09 ( 513 MB )
Episode 10 ( 524 MB )
Episode 11 ( 495 MB )
Episode 12 ( 570 MB )
Starring: Choi Woo-shik, Jeong Gyu-su, Jung Yong-hwa, Lee Ji-hyeon, Lee Yeon-hee, Ryu Seung-su, Yoon Park,
Want to See You Smile ( 2018 )
ဒီ chinese drama လေးကတော့ မကြာသေးခင်ကမှထွက်ရှိထားတဲ့လူငယ် romance ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အပိုင်း-၂၄ ပါဝင်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးကဒီလိုစတယ် ?? ‘စူးကျန်း’ဟာ Super Starတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် စူးကျန်းကလူတွေရဲ့အရေပြားနဲ့ထိတွေ့မိရင်နေမကောင်းဖြစ်တတ်တဲ့ထူးဆန်တဲ့ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူဖြစ်ပြီး ‘ကျိရှောင်ရှင်’ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလည်း accident တစ်ခုကြောင့် ဦးနှောက်ထိခိုက်ပြီး စာလုံးတွေမဖတ်နိုင်တဲ့အမြင်အာရုံချို့တဲ့တဲ့ဝေဒနာခံစားနေရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် သူမဟာ ဦးနှောက်ထိခိုက်ချို့ယွင်းတဲ့ရောဂါခံစားနေရပေမယ့် မင်းသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သူ အရံသရုပ်ဆောင်နေတာတွေရိုက်ကူးနေသူသူအလုပ်လုပ်ရင်အမြဲရှပ်ပြာရှပ်ပြာနိုင်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့နော်…
Ms. Hammurabi ( 2018 )
စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ဇာတ်လမ်းထက်ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့……. ဥပဒေရေးရာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး နေ့စဉ်လာနေမှုဘဝတွေကို လက်တွေ့ကျကျ မီးမောင်းထိုးပြမဲ့ Ongoing Serie လေးတစ်ခု မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဒီSerieလေးဟာဆိုရင် အပတ်စဉ် တနင်္လာနဲ့ အင်္ဂါနေ့တွေမှာ JTBC ရုပ်သံလိုင်းကနေ ကိုရီးယားစံတော်ချိန် ၁၁နာရီမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသမဲ့ Legal drama လေးဖြစ်ပါတယ်….. အပိုင်း ၁၆ပိုင်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး screenwriter က ဆိုးလ်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက တရားသူကြီးချုပ် Moon Yoo…
Frozen Love ( 2017 )
… Translators : KLP Encoder : MTK Quality : 720p HDTV File Size : 450 MB – 500 MB DOWNLOAD FOR OPENLOAD DOWNLOAD FOR SOLIDDRIVE